Iilayisensi ze-AutoCAD zezeMfundo-iGeofumadas
Ukufunda ithuluzi lekhompyutheni liya kuba lula imihla ngemihla, izifundo ezipheleleyo ze-AutoCAD I-intanethi, iiblogi, iiforamu kunye noluntu lwabantu basebenzelana ngokwaneleyo ukuze bafunde ngendlela yokuzifundisa.
Ukufunda i-AutoCAD akuyomfuneko ukuba ube nelayisensi engekho mthethweni, kwezi njongo kukho iinguqulelo zemfundo ezikhululekileyo kwi-AutoDesk, esebenza ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha oku bekwenzeka e-United States, Canada kunye nakwamanye amazwe ase Yurophu; kodwa ngoku ziyafumaneka phantse kuwo nawuphi na ummandla kubandakanya iLatin America (ngaphandle, kwezinye iindawo zohlwaywa ngokungabikho kwemithetho yepropathi enomgangatho ophezulu okanye ukungabikho kommeli we-AutoDesk wentengiso).
Ikhathalogu ibandakanya iimveliso:
AutoCAD P kunye ne-ID
AutoCAD I-Revit MEP Suite
I-Autodesk 3ds Max Design
I-Autodesk Green Building Studio
Autodesk Navisworks Lawula
I-Autodesk Quantity Takeoff
I-Autodesk Robot Structure Analysis Professional
I-Autodek Simulation Multiphysics
I-Autodesk SketchBook Designer
I-Autodesk Smoke ye-Mac OS X
I-Autodesk Moldflow Adviser Advanced
I-Autodesk Inventor Publisher
Indlela yokukhuphela i-AutoCAD
Ukukhuphela iilayisense zemfundo ze-AutoCAD kufuneka uhambe:
Emva koko ungene ngomsebenzisi obhalisiweyo, okanye ubhalise okokuqala. Inkqubo iyakusibuza ngolwazi olufana nobudala, iyunivesithi esifundela kuyo, unyaka apho siza kuthi siphumelele khona size ke sifumane i-imeyile ekufuneka siyingqinisisile.
Emva koku, ukhetha inkqubo, ulwimi, inkqubo yokusebenza, ukuba ingama-32 okanye ama-64 amasuntswana kwaye emva koko ... linda, kuba iifayile zihlala zi-3 GB. Siza kubona ikhowudi eboniswe ngombala obomvu, kunye neNombolo yeNombolo kunye nokuSebenza okuSebenzayo, ngaphandle kolu lwazi ilayisensi ekhutshelweyo iya kuba luvavanyo lweentsuku ezingama-30 kuphela.
Nje ukuba sifakelwe, siyacelwa idatha yokusebenza. Le datha inokubonwa kwiprofayili, kokubini kweSiriyeli kunye neMveliso ephambili.
Ziziphi iilayisensi zemfundo ezingenakukwenza
Iinguqulelo zemfundo ze-AutoDesk zisebenza ngokupheleleyo, ukulungiselela iinjongo zemfundo. Imisebenzi eyenziwe ngezi nguqulelo ine-watermark kuyilo lokuprinta, oluthi lwenziwe ngohlobo lwemfundo.
Akukho kuvunyelwa ukuwasebenzisa ngenjongo yokuthengisa, okanye ukunika izifundo kwiziko lokufundisa ezorhwebo, kwaye abanako ukunyulwa kwiilayisenisi ezipheleleyo.
Awukwazi ukwenza intlawulo yonyaka yalezi mvume, baneminyaka engama-3 (iinyanga ze-36) ukususela ngomhla wokukhuphela.
Ziyakulungeleka kwabo babhala kwi-Intanethi, ukuba bangazisebenzisi iilayisensi ezingekho mthethweni, bancinci ukukhuthaza ukuqhuba kwabo.
Indlela yokugada i-AutoCAD
Ukuba kufuneka ufunde i-AutoCAD, oku kuchazwe ngasentla kwanele. Nje ukuba sigqibe isidanga, akukho ngqiqweni ukusebenzisa ilayisensi engekho mthethweni, ngakumbi ukuba ootitshala abangama-64 abasifundisa iiklasi ezahlukeneyo kwiYunivesithi banegalelo kumrhumo omncinci wokusenza siqonde ukuba yintoni ubuchwephesha.
Kukho umthetho ongenakuphepheka kobu bomi, ukuba into esiyihlwayelayo, siya kuyivuna ke. Ke ukuba asifuni ukuba uyilo lwethu lungenwe ngenye imini okanye amaqhinga angcolileyo adlalwe ngexesha lokubhida, kufuneka sihlwayele ukuthembeka malunga nemithetho yepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
Ngaloo nto, ngaphambi kokuba ukunyaniseka ku-piratear ...
Ukuba uza kuqala ishishini okanye isitetimenti sodwa somthengisi esibonelela ngeenkonzo, kungcono ukuthenga ilayisensi ye-AutoCAD LT ukuqala ngayo. Oku kubiza malunga ne- $ 1,000, egutyungelwe ngumsebenzi wokuqala ohlawulelwayo. Akukho nto imbi njengokuphicothwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda oza kuwe, kwaye bakufumanele isoftware engekho mthethweni, ongayisebenzisiyo.
Ukuba ufuna ukugcina iichips, kakuhle kukho IntelliCAD, Oku kufana nokuba ne-AutoCAD, ngamaxabiso ngaphezulu kwe-US $ 400. Ukuba ufuna ukuchitha imali encinci, kukho isoftware yoMthombo ovulekileyo, nangona ungazokwazi ukwenza yonke into (ubuncinci kwi-CAD).
Ukuba ngaba ufuna ukuchitha penny software, bekuya kufuneka ukukhangela ukuba ngokwenene tikarhatela ukuba oosomashishini, kuba ishishini kubandakanya mali oluqhubekayo ubunakho (ekuhlaleni, izixhobo, izithuthi, abasebenzi, isoftware, uqeqesho) nokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo, ukuba sithe ixabiso ukuba umthengi ufumana izakhono zethu.
Ikhosi kwiimarike zomhlaba ongamiselwanga kunye nokulungiswa
ookumkani abakwaSamuweli uthi:
Siyabonga ngomdla wakho, asithengisi i-software, kodwa unokuqhagamshelana ngqo ne-AutoDesk okanye i-Studica
Elena Gutierrez uthi:
Uncedo lokundinceda ungithumelele i-imeyile, ndisebenzisa i-quote yeeprogram ezizenzekelayo iinguqu zamaphepha ezifundo zakamuva
I-AutoCAD Civil 3D Iingxaki zoPhuhliso